Ny Cintiq Pro Engine ary Cintiq Pro dia asongadin'i Wacom | Famoronana an-tserasera
Wacom, toa an'i Adobe, dia orinasa roa izay manana fatorana miavaka manokana amin'ny fanomezana fitaovana ampy hahafahantsika miatrika vanim-potoana dizitaly misy ny borosy niova ho an'ny penina ary nanjary efijery ny lamba lamba Amin'ny alalàn'ny fampitana ireo hevitra noforoninay rehetra hisamborana azy ireo amin'ny Illustrator, Photoshop sy maro hafa.
Wacom dia nanolotra modely fanaovana computing compact antsoina hoe Wacom Cintiq Pro mankany amin'ny Cintiq Pro ho lasa studio famoronana mahery ho an'ny mpanakanto, mpamorona ary injeniera. Eo ambanin'ny Windows 10, manolotra ny fahaizana mandefa rindranasa sy mahazo ny fizotran-asa ho an'ny karazana asa rehetra toy ny 3D, sary mihetsika ary zava-misy virtoaly.
Miresaka modely roa isika Wacom Cintiq Pro Engine izay tafiditra tanteraka ao anaty monitor vaovao Fifandraisana 24-inch. Ny maotera Cintiq Pro Modular dia mifanaraka tsara ao ambadiky ny Cintiq Pro 24.
Vita izany, hananantsika eo alohanay studio famoronana feno miaraka amin'ny Windows 10, miaraka amin'izany rehetra izany dia midika hoe afaka mampiasa programa, toy ny Adobe's, sy ireo apps famolavolana izay mifanentana indrindra aminay.
Ny Cintiq Pro Engine i5 dia misy Windows 10 Pro, Chip quad-core Intel Core i5HQ, NVIDIA Quadro P3200, 6GB fahatsiarovana sary, 16 GB RAM, 256 GB SSD, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 ary andiana mpampifandray toy ny 1 RJ45, 2 USB type-C, 1 HDMI ary 1 DP hamaly ny vidiny 2.699,90, XNUMX euro. Mazava ho azy fa miatrika ekipa ho an'ny matihanina isika.
Etsy ankilany, ny maodely hafa dia ny Cintiq Pro Engine Xeon miaraka amin'ny Windows 10 Pro, puce Intel XEON, NVIDIA Quadro P3200, sary natokana 6 GB, 32 GB RAM, SSD fitehirizana anatiny 512 GB, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2 ary ny fifandraisana mitovy amin'ny etsy ambony, na dia misy vidiny ambony aza: 3.549,90 euro.
será hatramin'ny Mey 2018 rehefa samy misy ny kinova Cintiq Pro Engine; ny Wacom izay mbola mitovy amin'ny vokatra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Cintiq Pro Engine sy Cintiq Pro vaovao an'i Wacom dia aseho ho an'ny studio modular iray manontolo
Ianaro ny fomba hamoronana doka famoronana mahomby izay miasa